ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ ပေါ်တယ်ကွန်ယက်ပိုင် ယနေ့ဘလော့ကုမ္ပဏီပိုင် AB အင်တာနက်ကွန်ရက်များ 2008 SL, CIF: B85537785, C / Mirasierra 14-1 2º B၊ စပိန်နိုင်ငံ၊ ၂၈၄၁၀ Manzanares el Real တွင်လိပ်စာရှိသည်။
အီးမေးလ်က ထိတှေ့ (မှာ) ဘလော့ဂ် (ပွိုင့်) com
ဖုန်း (+34) 902 909 238
တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်၏ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်: Miguel elngel Gaton ၏ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ် miguel (at) actualityblog (dot) com
သင်၏အခွင့်အရေးကိုမည်သို့ကျင့်သုံးရမည်နည်း လေ့ကျင့်ခန်းကိုတောင်းဆိုရန်သင်၏အီးမေးလ်သို့မဟုတ်အခြားအလားတူမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းအပါအ ၀ င် AB Internet Networks 2008 SL ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောရုံးသို့သို့မဟုတ်ဤတရားဝင်အသိပေးစာခေါင်းစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာသို့စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အောက်ပါအခွင့်အရေးများ -
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲခွင့်ဖြေ - AB Internet Networks 2008 SL ကိုဒီကုမ္ပဏီကမင်းရဲ့ဒေတာတွေကိုကိုင်တွယ်နေလားမေးနိုင်တယ်။
ပြင်ဆင်ရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် (အမှု၌သူတို့မမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ကြသည်) ။
သင်၏ကုသမှုကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်တောင်းခံပိုင်ခွင့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို AB ၏အင်တာနက်ကွန်ယက် ၂၀၀၈ SL ကတောင်းဆိုမှုများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်အတွက်သာသိမ်းထားလိမ့်မည်။
ကုသမှုကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်: AB Internet Networks 2008 SL သည်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အငြင်းပွားမှုများအားကာကွယ်ရန်အတွက် မှလွဲ၍ သင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းဒေတာများကိုသင်ညွှန်ပြသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်ခွင့်: အကယ်၍ သင်၏ဒေတာကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလုပ်ဆောင်စေလိုပါက AB Internet Networks 2008 SL သည်သင်၏အချက်အလက်များ၏မန်နေဂျာအသစ်သို့လွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
အချက်အလက်များ၏ဖျက်ပိုင်ခွင့်။ တရားဝင်အတည်ပြုချက် မှလွဲ၍ သင်၏အတည်ပြုချက်ကိုပယ်ဖျက်လိမ့်မည်။
သင်၏အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံစံများ၊ ပုံစံများနှင့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ - စပိန်ဒေတာကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ: သငျသညျသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုသင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကယင်းကိုရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုမီသဘောတူခွင့်ပြုချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ကုသမှု၏တရားဝင်မှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်ထံမည်သို့တိုင်ကြားရမည်နည်း။ အကယ်၍ AB Internet Networks 2008 SL သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာတစ်ခုရှိသည်ဟုသင်ယူဆပါကသင်၏တောင်းဆိုမှုများကို AB Internet Networks 2008 SL ၏လုံခြုံရေးမန်နေဂျာသို့ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သို့မဟုတ်၊ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခွင့်အာဏာ သောဖြစ်ခြင်း, ကိုက်ညီ ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်စပိန်အေဂျင်စီ, စပိန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ညွှန်ပြတ။
အချိန်မရွေးဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသိမ်းဆည်းထားသောဒေတာများအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်ရုံ contacto@actualidadblog.com သို့အီးမေးလ်တစ်ခုပို့ပြီးတောင်းဆိုရန်သာလိုသည်။
E-mail ဖြင့်ထည့်သွင်းရန်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများ၏အချက်အလက်များ: အသုံးပြုသူသည်စာရင်းသွင်းထားသည့်အချိန်အထိစာရင်းသွင်းသည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။
AB Internet Networks 2008 SL မှတင်ထားသောအသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုလူမှုကွန်ယက်ရှိစာမျက်နှာများနှင့် profiles များသို့ - အသုံးပြုသူသည်သူတို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းသည့် အချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့ကိုသူတို့ရုပ်သိမ်းသည်အထိပြုလုပ်သည်။
AB Internet Networks 2008 SL သည်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည် သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလေးစားပါ တော် ၀ င်အမိန့် ၁၇၂၀ ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ၎င်းတို့အား၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုရန်အပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကုသခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၎င်းတို့အားထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့်ဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအော်ဂဲနစ်ဥပဒေ ၁၅/၁၉၉၉ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စည်းမျဉ်းများကိုအတည်ပြုပေးသောဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် ၂၀၀၇ ။
ပုံစံများမှတဆင့်ပေးအပ်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်မှန်ကန်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့အားမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုပေးရန်တာဝန်ရှိကြောင်းသင်အာမခံပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာသင်သည်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်သင်၏တကယ့်အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း၊ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်တိကျမှုရှိကြောင်းအာမခံသည်။
ထို့အပြင်၊ သင်၏အချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီမွမ်းမံထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ ပေးထားသောအချက်အလက်များ၏မတိကျမှုသို့မဟုတ်မှားယွင်းမှုနှင့်ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့် AB Internet Networks 2008 SL သို့ဖြစ်စေတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဖြစ်စေ၊ ဟု၏အသုံးပြုမှု။
AB Internet Networks 2008 SL သည်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ brute force attack နှင့် code injections တည်ရှိမှုကိုသိရှိနိုင်ရန်လုံလောက်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုချမှတ်ခဲ့သည်။
သို့သော်၊ အင်တာနက်ပေါ်ရှိကွန်ပျူတာစနစ်များ၏လုံခြုံရေးအစီအမံများသည်လုံးဝစိတ်ချရမှုမရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်သင်သိထားရပါမည်၊ ထို့ကြောင့် AB Internet Networks 2008 SL သည်ဗိုင်းရပ်စ်များ (သို့) ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အခြားဒြပ်စင်များမရှိခြင်းကိုအာမမခံနိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူ၏ (ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ) သို့မဟုတ်သူတို့၏အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များပါ ၀ င်သည်။
ဒီနေသော်လည်းကြိုးစားရန် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုအာမခံပါ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏သတင်းပို့ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သောချိုးဖောက်မှုများကိုအစီရင်ခံသည့်တက်ကြွသောလုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်မှုစနစ်ရှိသည်။
မည်သည့်ချိုးဖောက်မှုကိုမဆိုတွေ့ရှိပါက AB Internet Networks 2008 SL ကဝန်ခံမည် အများဆုံး ၇၂ နာရီအတွင်းအသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းကြားပါ.
၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးသည်ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံများ၊ မှတ်ချက်ပုံစံများနှင့်အသုံးပြုသူများကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၊
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လုပ်ဆောင်ရန်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်အမြဲလိုအပ်သည်။
ဝက်ဘ်နှင့် hosting: ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Occentus Networks မှ AB Internet Networks 1.2 SL စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောဆာဗာများပေါ်တွင်စံအဆက်အသွယ်ပုံစံများဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာပေးပို့နိုင်ရန် SSL TLS v.2008 စာဝှက်စနစ်ပါရှိသည်။
ဝဘ်မှတစ်ဆင့်ကောက်ယူသောအချက်အလက်များ: စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် AB Internet Networks 2008 SL ပိုင်ဆိုင်သောဖိုင်များတွင်ထည့်သွင်းခြင်းခံရလိမ့်မည်။
သတင်းအချက်အလက်ကမ်းလှမ်းရန်၊ SPAM မှတ်ချက်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်မမှန်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျ၏မူလအစကိုအတည်ပြုရန်အသုံးပြုမည့်သင်၏ IP ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်ဖြစ်သည် (ဥပမာ - တူညီသောအမှုတစ်ခု၏ဆန့်ကျင်ဘက်ပါတီများကထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှပင်) ။ သင့်ရဲ့ ISP နှင့်ဆက်စပ်သောဒေတာအဖြစ်။
တုံ့ပြန်ချက် Form ကို- ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသူများသည်ဆိုဒ်၏ထုတ်ဝေမှုများအပေါ်မှတ်ချက်များကိုချန်ထားနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူကပေးသောအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းသောကွတ်ကီးတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်လာရောက်လည်ပတ်မှုအသစ်တိုင်းတွင်၎င်းတို့အားပြန်လည်ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲအီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နာမည်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အိုင်ပီလိပ်စာများကိုလည်းစုဆောင်းထားသည်။ ဒေတာများကို Occentus Networks ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြေ - သူတို့တောင်းဆိုတာကိုခွင့်မပြုဘူး။
ဝယ်ယူပုံစံကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးများမှပေးသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူရန်အသုံးပြုသူသည်ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များလိုအပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီတွင်သတ်မှတ်ထားသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခြေအနေများနှင့်အညီဝယ်သူပုံစံရှိသည်။ ဒေတာများကို Occentus ကွန်ယက်ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်၌ငွေရှင်းသည့်ကာလအတွင်းသင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်တွင်သင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်း၊ ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်များနှင့်သင်၏အမှာစာများဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်အခြားအရာများပါ ၀ င်နိုင်သည်။
သင်၏အကောင့်၊ အော်ဒါ / ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်ထံပေးပို့ပါ။
သင်၏အကောင့်ကိုပြုပြင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲပါ၊ သင့်အားနည်းပညာနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်၊ သင်၏အထောက်အထားကိုစစ်ဆေးပါ။
တည်နေရာနှင့်ယာဉ်အသွားအလာအချက်အလက် (IP လိပ်စာနှင့်ဘရောင်ဇာအပါအ ၀ င်) ကိုသင်မှာယူပါကသို့မဟုတ်သင့်တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ အခွန်နှင့်ပို့ဆောင်စရိတ်ကိုခန့်မှန်းရန်လိုအပ်ပါက။
ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာများကြည့်ရှုပြီးသင့်ရဲ့ session သည်တက်ကြွနေစဉ်ကြည့်ရှုပါအကြောင်းအရာ။
သင်၏ session တက်နေစဉ် ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီသင်ပို့ဆောင်စရိတ်တောင်းပါကပို့မည့်လိပ်စာ။
သင်၏ session သည်တက်ကြွနေစဉ်သင်၏လှည်းပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုခြေရာခံရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကွတ်ကီးများ။
အကယ်၍ သင်သည်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လျှင်သင်၏အမည်၊ လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုသင်၏အနာဂတ်အမှာစာများတွင်အသုံးပြုရန်သိမ်းဆည်းထားသည်။
သတင်းလွှာကြေးပေးသွင်းခြင်းပုံစံများ: AB Internet Networks 2008 SL သည်သင်၏အီးမေးလ်အချက်အလက်၊ အမည်နှင့်လက်ခံမှုကိုလက်ခံခြင်းကိုသိမ်းထားသော Sendgrid, Feedburner သို့မဟုတ် Mailchimp သတင်းလွှာပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ သင်လက်ခံရရှိသောတင်ပို့မှုတစ်ခုစီ၏အောက်ခြေတွင်ရှိသောသီးခြားလင့်ခ်တစ်ခုမှတဆင့်အချိန်မရွေးသတင်းလွှာမှစာရင်းသွင်းနိုင်သည်
အီးမေးလ်: ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှာ Sendgrid ဖြစ်သည်။
လက်ငင်းစာတိုပေးပို့: AB Internet Networks 2008 SL သည် WhatsApp၊ Facebook Messenger သို့မဟုတ် Line ကဲ့သို့သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမပေးနိုင်ပါ။
ငွေပေးချေမှုကိုပံ့ပိုးပေးသူများ: ဝက်ဘ်မှတဆင့်သင်သည်လင့်ခ်များမှတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည် PayPal က o အစင်းAB Internet Networks 2008 SL မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေရန်။ AB Internet Networks 2008 SL ၀ န်ထမ်းများကသင်ပြောသောတတိယပါတီများသို့ပေးသောဘဏ်အသေးစိတ် (ဥပမာ - ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်) ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မရရှိနိုင်ပါ။
အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ embedded အကြောင်းအရာ
ဝဘ်ပေါ်ရှိဆောင်းပါးများတွင် embedded ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ (ဥပမာ - ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဆောင်းပါးများစသည်) ပါဝင်နိုင်သည်။ အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှထည့်သွင်းထားသောအကြောင်းအရာသည် website ည့်သည်သည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်ပတ်ခဲ့သည့်နည်းတူပြုမူသည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်သင့်အကြောင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်၊ cookies များကိုသုံးနိုင်သည်၊ embed third-party tracking နှင့် embedded အကြောင်းအရာနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ သင်၌အကောင့်တစ်ခုရှိပါကသို့မဟုတ်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါက embedded အကြောင်းအရာနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုခြေရာခံနိုင်သည်။
အခြားဝန်ဆောင်မှုများ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအချို့တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသီးခြားအခြေအနေများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းခံခြင်းမပြုမီဖတ်ရန်နှင့်လက်ခံရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တရားဝင်မှု ဤအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်တောင်းဆိုသောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသာပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကွန်ရက်များရှိခြင်း: AB Internet Networks 2008 SL သည်အင်တာနက်ရှိအဓိကလူမှုကွန်ယက်အချို့တွင်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ရှိသည်။
ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တရားဝင်မှု အထက်ဖော်ပြပါကွန်ယက်တစ်ခုစီတွင်ဒေတာနှင့်ဒေတာများကို AB Internet Networks 2008 SL မှဆောင်ရွက်ပေးမည့်ကုသမှုမှာလူမှုကွန်ယက်သည်ကော်ပိုရိတ်ပရိုဖိုင်းများအားခွင့်ပြုသည့်အရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် AB Internet Networks 2008 SL သည်ဥပဒေအားတားမြစ်ထားသည့်အခါ၎င်း၏နောက်လိုက်များအားလူမှုကွန်ယက်က၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများ၊ တင်ဆက်မှုများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်တစ် ဦး ချင်းဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအသိပေးနိုင်သည်။
ဒေတာထုတ်ယူမှု AB Internet Networks 2008 SL သည်အသုံးပြုသူများ၏သဘောတူညီမှုကိုတိတိကျကျမရရှိပါက၊ လူမှုကွန်ယက်များမှအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အခွင့်အရေး: လူမှုကွန်ယက်များ၏သဘောသဘာဝအရနောက်လိုက်၏အချက်အလက်ကာကွယ်မှုအခွင့်အရေးကိုထိရောက်စွာလေ့ကျင့်ခြင်းက၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပြုပြင်ခြင်းကိုခံရသောအခါ၊ AB Internet Networks 2008 SL သည်အတိုင်းအတာအထိသင့်အားကူညီရန်နှင့်အကြံပေးလိမ့်မည် ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏။
အီးမေးလ်ပို့ရန်။ AB Internet Networks 2008 SL e-mail ဝန်ဆောင်မှုကို Sendgrid ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ပေးသည်။
လူမှုကွန်ယက်များ AB Internet Networks 2008 SL သည်အမေရိကန်လူမှုရေးကွန်ယက်များဖြစ်သော YouTube၊ Facebook၊ Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard ကိုအသုံးပြုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဆာဗာများနှင့်ပတ်သက်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝရှိသည်။ AB Internet Networks 2008 SL သည်၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူများ၊ စာရင်းပေးသွင်းသူများသို့မဟုတ်ရေကြောင်းသူများသည် AB AB Internet Networks 2008 SL သို့ပေးပို့သော (သို့) မျှဝေသောအချက်အလက်များကိုဆက်ဆံသည်။
ငွေပေးချေသူများ။ သငျသညျမှတဆင့်ပေးဆောင်နိုင်အောင် PayPal က o အစင်း, AB Internet Networks 2008 SL သည်၎င်းတို့အားတင်းကြပ်စွာလိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတောင်းဆိုချက်ထုတ်ပေးရန်အတွက်ဤငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသို့ပေးပို့လိမ့်မည်။
သင်၏ဒေတာများကိုအမြဲတမ်းရယူပိုင်ခွင့်၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူအဖြစ်သင်မှတ်ပုံတင်သည့် အချိန်မှစ၍ AB Internet Networks 2008 SL သည်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်အီးမေးလ်၊ IP လိပ်စာ၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ ID / CIF နှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ AB Internet Networks 2008 SL သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကြိုတင်အသိပေးမှုမရှိပဲအချိန်မရွေးပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်၊ သို့သော်တရား ၀ င် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏တင်ဆက်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုတရား ၀ င်အသိပေးချက်ကဲ့သို့အသိပေးသည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူ၏အခြေအနေကိုမည်သူပြုလုပ်သည်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤတရားဝင်အသိပေးချက်ကို ယခုအချိန်မှစ၍ ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမရှိဘဲလက်ခံခြင်း၊
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသောအခါအသုံးပြုသူသည် AB Internet Networks 2008 SL သို့မဟုတ်တတိယပါတီများ၏ရုပ်ပုံ၊ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို web ကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီသည်ဤ site ရှိမတူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်စာမျက်နှာများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်းသိုလှောင်ထားကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဤ site သို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားလက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်အသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည် cookies တွေကို။ အဆိုပါ cookies တွေကို ၎င်းတို့သည်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီအသုံးပြုသောဘရောင်ဇာတွင်သိုလှောင်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်ပမာဏအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးဆာဗာသည်နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အချို့သောအချက်အလက်များကိုမှတ်မိစေသည်။ ဤအချက်အလက်များသည်သင့်အားတိကျသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုပြီးသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဦး စားပေးမှုများ၊ လည်ပတ်မှုများသို့မဟုတ်သင်လည်ပတ်သောစာမျက်နှာများစသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
လက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အားအသုံးပြုသူများ cookies တွေကို သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုမီအကြောင်းကြားလိုပါကဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင်၏ဘရောင်ဇာကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
ယနေ့ဘရောင်ဇာအများစုသည်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခွင့်ပြုသည် cookies တွေကို နည်းလမ်း ၃ မျိုးဖြင့် -
အ cookies တွေကို သူတို့ဘယ်တော့မှလက်ခံကြသည်မဟုတ်
တစ်ခုချင်းစီကိုလက်ခံသင့်သလား browser ကအသုံးပြုသူကိုမေးတယ် cookie ကို.
အ cookies တွေကို အမြဲလက်ခံကြသည်။
မည်သည့်အရာကိုတိတိကျကျဖော်ပြနိုင်သည့်ဘရောက်ဇာတွင်လည်းပါ ၀ င်နိုင်သည် cookies တွေကိုလက်ခံခံရဖို့ရှိသည်သောမ။ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူသည်အောက်ပါရွေးချယ်မှုတစ်ခုခုကိုပုံမှန်လက်ခံနိုင်သည်။
ငြင်းပယ် cookies တွေကို အချို့သောဒိုမိန်းများ၊
ငြင်းပယ် cookies တွေကို တတိယပါတီများ၊
accept cookies တွေကို Non-persistent အဖြစ် (သူတို့ browser ကိုပိတ်လိုက်သောအခါသူတို့ဖယ်ရှားပစ်);
ဆာဗာကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါ cookies တွေကို တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားဒိုမိန်းသည်။
DART cookie ကို
ဂူဂဲလ်သည်မိတ်ဖက်ပံ့ပိုးသူအနေဖြင့်ကွတ်ကီးများကိုသုံးပြီးဝဗ်ပေါ်မှကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
Google ကြော်ငြာစနစ်မှ DART cookie ကိုအသုံးပြုခြင်းအားသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအားပိတ်နိုင်သည် ဂူဂဲလ် privacy စင်တာ.
ထို့အပြင် browser (ဘရောက်ဆာ) များသည်အသုံးပြုသူများအားကြည့်ရှုရန်နှင့်ဖျက်ရန်ခွင့်ပြုသည် cookies တွေကို တစ် ဦး ချင်း။
သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကွတ်ကီး နှင့်: ဝီကီပီးဒီးယား
web ကို beacons
ဒီဆိုဒ်သည်လည်းလက်ခံနိုင်သည် web beacons (လည်းအဖြစ်လူသိများ ဝက်ဘ် bug များ) ။ The web beacons ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ဆိုဒ်၏ဝဘ်စာမျက်နှာ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်အတွင်း၌မြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မမြင်ရသောတစ်ပစ်ဇယ်တစ်ခု၏ pixel တစ်ခု၏သေးငယ်သည့်ပုံများဖြစ်သည်။ The web beacons အစေခံခြင်းနှင့်အလားတူလမ်းအတွက်အသုံးပြုကြသည် cookies တွေကို။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, web beacons ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ဝဘ်စာမျက်နှာသို့ဝင်သောအသုံးပြုသူများ၏အသွားအလာကိုတိုင်းတာရန်နှင့်ဆိုက်တစ်ခု၏အသုံးပြုသူများပုံစံကိုရရှိရန်အသုံးပြုသည်။
သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက web beacons နှင့်: ဝီကီပီးဒီးယား
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ visitors ည့်သည်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအမည်မသိသို့မဟုတ်တတိယပါတီများဖြစ်သောကြော်ငြာရှင်များ၊ စပွန်ဆာများသို့မဟုတ်စာရင်းစစ်များနှင့်အတူမျှဝေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီးအချက်အလက်ကာကွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏အခွင့်အရေးအားလုံးကိုလက်ရှိစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီလေးစားလိမ့်မည်။
ဒီ site သည်အသွားအလာကိုမတူညီသောဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်တိုင်းတာသည် cookies တွေကို o web beacons ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်။ ယခုဆိုဒ်၏အသွားအလာကိုတိုင်းတာရန်အောက်ပါဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုသောအဖြေတစ်ခုချင်းစီ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသင်ပိုမိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဂူဂဲလ် (Analytics) Google Analytics သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ
Automattic / Quantcast (JetPack Stats) Automattic privacy ကိုမူဝါဒ y Quantcast.
Disqus (မှတ်ချက်ပေးသည့်စနစ်) Disqus privacy မူဝါဒ
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာ၊ ဤကြော်ငြာကိုအသုံးပြုသောကြော်ငြာဆာဗာများကပြသသည် cookies တွေကို အသုံးပြုသူများကိုဆက်စပ်ကြော်ငြာအကြောင်းအရာပြသရန်။ ထိုကြော်ငြာဆာဗာတစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒရှိသည်၊ ၎င်းကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများတွင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
အ cookies တွေကို ၎င်းတို့သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်သွားလာရန်ခွင့်ပြုရန်အသုံးပြုသူဘရောက်ဇာတွင်ဖန်တီးထားသောဖိုင်များဖြစ်သည်။
cookie နာမတျောကို ရည်ရွယ်ချက် ပိုမိုသိရှိလိုပါက
__utmz လာရောက်လည်ပတ်မှု၏မူလအစနှင့်အခြားအလားတူစာရင်းအင်းအချက်အလက်များကိုသိရှိနိုင်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူများ၏သွားလာမှုနှင့်ပတ်သက်သောအမည်မသိသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ cookies များကိုမသုံးပါ။ - Google Privacy Center
-Google Analytics မှဖယ်ထုတ်လိုက်သောပလပ်အင်
Google Adsense၊ နှစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ DART __ အဘ ကြော်ငြာကိုအစေခံရန်အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည် - ဂူဂဲလ် Adsense သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ
Automattic, Quantcast နှင့် Disqus __
ဟုတ်ပါတယ် လည်ပတ်မှု၏မူလအစနှင့်အခြားအလားတူစာရင်းအင်းအချက်အလက်များကိုသိရှိရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူများ၏သွားလာမှုအပေါ်အမည်မသိသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ - Quantcast သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ
ထပ်တိုး __Atuvc __atuvc cookie ကို ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏လူမှုခလုတ်များတွင်မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းထားသောလူမှုရေးခွဲဝေမှုကောင်တာကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်သေချာစေရန်အတွက် Addthis social sharing system မှအသုံးပြုသည်။ - Addthis privacy မူဝါဒ
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ cookies တွေကို။ အသုံးပြုသူက၎င်းတို့ကိုလက်မခံခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏ဘရောက်ဇာကိုပိတ်ဆို့ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင့်တော်သည့်နေရာတွင်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှအသုံးပြုသောလူမှုကွန်ယက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကွတ်ကီးများလည်းသူတို့ကိုယ်ပိုင် cookie ပေါ်လစီများရှိသည်။
၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ, Twitter ကို Cookie cookies များကိုများ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အသုံးပြုခြင်း.
Facebook မှာ cookie ကို၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကွတ်ကီးမူဝါဒ
ဂူဂဲလ် + နှင့်ဂူဂဲလ်မြေပုံများကဘာအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်း၏စာမျက်နှာရှိပြprovisions္ဌာန်းချက်များအရ အသုံးပြုသော cookies များကိုအမျိုးအစား
၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ cookie options များ, cookies များကိုများ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အသုံးပြုခြင်း
အတွက်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ် Gravatar cookie ကို ကုမ္ပဏီ Automattic ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ.
လောလောဆယ်ဤ site သည်အတွက်ကြော်ငြာများကိုလက်ခံသည်။
Google က Adsense: ဂူဂဲလ် Adsense သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွအေနမြေား -အစီအစဉ်မူဝါဒများ
သဘောတူညီချက် Adconion သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ
Google DFP: Google DFP သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ.
အရောင်းအ ၀ ယ်များ Buysellads privacy မူဝါဒ - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွအေနမြေား
Taboola: Taboola privacy မူဝါဒ.
ဆိုက်တွင်လက်ရှိဥပဒေပြဌာန်းမှုသို့မဟုတ်ဥပဒေသိပ္ပံဆိုင်ရာထင်ဟပ်မှုမရှိသောယေဘူယျအခြေအနေများကိုရည်ညွှန်းခြင်းမရှိသောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်စာသားများပါ ၀ င်သောကြောင့်အသုံးပြုသူမှမည်သည့်အခါကမျှကိစ္စရပ်များတွင်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
၎င်းတို့တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည် AB Internet Networks 2008 SL ၏အမြင်များကိုသေချာပေါက်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။
၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သောဆောင်းပါးများ၏ပါ ၀ င်မှုသည်တရား ၀ င်အကြံဥာဏ်များအတွက်အစားထိုးဟုမယူဆနိုင်ပါ။
အသုံးပြုသူသည်သက်ဆိုင်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်ကို ဦး စွာမချဉ်းကပ်ဘဲဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အရေးယူခြင်းမပြုရ။
ဤအထွေထွေအခြေအနေများအားဖြင့်မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်စက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သော်လည်းကောင်း၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုပါ ၀ င်သည်။ သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုကိုင်ဆောင်ထားသူကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့်သို့မဟုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသောအမှုများ မှလွဲ၍ မည်သည့်သဘောသဘာဝကိုမဆိုနည်းလမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့်ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း။
အသုံးပြုသူသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံး၊ အပြည့်အစုံအက္ခရာမပါဘဲစာသား၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ အကြောင်းအရာများ (ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်းနှင့်တင်ဆက်ခြင်းအပါအ ၀ င်)၊ ရုပ်မြင်သံကြားပစ္စည်းများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များပါ ၀ င်သည်ကိုလက်ခံပြီးလက်ခံသည်။ စပိန်နိုင်ငံပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံတကာစာချုပ်များနှင့်စပိန်၏အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့်ဥပဒေများအရမှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များနှင့်အခြားတရားဝင်အခွင့်အရေးများကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်။
အသုံးပြုသူ (သို့) တတိယပုဂ္ဂိုလ်က ၄ င်းတို့၏တရား ၀ င်အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုဆိုက်တွင်အချို့သောအကြောင်းအရာများအားထည့်သွင်းခြင်းကြောင့်ချိုးဖောက်သည်ဟုယူဆပါက၎င်းတို့သည် AB Internet Networks 2008 SL အားဤအခြေအနေအားအကြောင်းကြားရမည်။
ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့် site ပေါ်တွင်သူတို့တည်ရှိရာမှကာကွယ်ထားသည့်အကြောင်းအရာများ၊ ညွှန်ပြထားသောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အကြောင်းကြားစာတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိစေရန်သက်ဆိုင်သူကတာ ၀ န်ယူမှုရှိကြောင်းဖော်ပြပါ။
ထို site ၏လက်ရှိအသုံးပြုမှုအခြေအနေများကိုစပိန်ဥပဒေအရ၎င်းအစွန်းရောက်များအားလုံးတွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒီတရားဝင်အသိပေးစာ၏အရေးအသားနှင့်အနက်ကိုဘာသာစကားသည်စပိန်ဘာသာဖြစ်သည်။ ဤတရားဝင်အသိပေးချက်ကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တင်သွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် AB Internet Networks 2008 SL သည်ဤစာသားသို့မဟုတ် AB Internet Networks 2008 SL ၏လုပ်ဆောင်မှုများမှဖြစ်ပေါ်လာသောအငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော Consumer Arbitration System သို့တင်ပြနိုင်သည်။ အသင်း ၀ င်ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု၊ အသုံးပြုသူသည်သင့်လျော်သော bar အသင်း၏သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ရမည်။
စပိန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရသတ်မှတ်ထားသောစားသုံးသူသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအဆင့်အတန်းရှိသူများနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတွင်နေထိုင်သူများသည် AB Internet Networks 2008 SL သို့အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်တရားရုံးပြင်ပသဘောတူညီချက်ကိုရယူရန်ကြိုးစားနိုင်သည် ရန် အွန်လိုင်းအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမှုပလက်ဖောင်း, ဥရောပသမဂ္ဂအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့်အောက်မှာဥရောပကော်မရှင်ကတီထွင်ခဲ့သည် Regulation (EU) 524/2013.
အသုံးပြုသူသည်စားသုံးသူ (သို့) အသုံးပြုသူမဟုတ်ပါကအခြားမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုလိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းမရှိလျှင်၊ ပါတီများသည်မက်ဒရစ်မြို့တော်၏တရားရုံးများနှင့်ခုံရုံးများသို့တင်ပြရန်သဘောတူကြသည်။ သူတို့ကိုကိုက်ညီစေခြင်းငှါအခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။
အသုံးပြုသူ၏အခြေအနေကိုဆောင်ရွက်သူ၊ ယခုအချိန်မှစ၍ ကြိုတင်မှာကြားထားချက်မရှိဘဲလက်ခံခြင်း၊ ဤတရားဝင်အသိပေးချက်အပြင်သင့်လျော်သောနေရာတွင်၎င်းကိုဖြည့်စွက်သည့်အထူးအခြေအနေများအားမည်သူမဆိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း ပေါ်တယ်၏အချို့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် contents တွေကိုနှင့်ဆက်ဆံရေး။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည် AB Internet Networks 2008 SL နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအစအ ဦး ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအသုံးပြုသူကိုအကြောင်းကြားပြီးလက်ခံသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည်လက်ရှိဥပဒေ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားတရားမဝင်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုတားဆီးရန်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပါအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တားမြစ်သည် -
လင့်ခ်များ၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာအသုံးပြုသူများအားအဆိုပါလင့်များကိုဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသိရှိခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် AB Internet Networks 2008 SL သည်လင့်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူမှရရှိနိုင်သောရလဒ်များအတွက်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုတာ ၀ န်မရှိပါ။
သူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှမည်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာချိတ်ဆက်စက်ကိုမဆိုတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုသူသည် AB Internet Networks 2008 SL ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။
AB Internet Networks 2008 SL နှင့် link တည်ရှိရာ site ၏ပိုင်ရှင်အကြားဆက်ဆံရေးတည်ရှိမှု၊ AB Internet Networks 2008 SL မှ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဆက်သွယ်မှုတည်ရှိမှုကို link တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းကမည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှမဆိုလိုပါ။ ။
လုပ်ဆောင်ချက် မည့် သို့မဟုတ်အလားတူ AdWords မှပရိသတ်များကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယခင်ကဝင်ရောက်ဖူးသူများနှင့်၎င်းတို့အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီရန်ခွင့်ပြုသည်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်သားစရာကောင်းသော cookie ကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည် (၎င်းသည် Google Adwords, Criteo သို့မဟုတ် remarketing ကိုကမ်းလှမ်းသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများမှ) ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤကွတ်ကီးသည် visited ည့်သည်အချက်အလက်များကိုသိုလှောင်သည်။ သူတို့ကြည့်ရှုခဲ့သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စျေးဝယ်လှည်းကိုစွန့်ပစ်လိုက်သည်ဆိုပါစို့။
ဒီ website ၏အသုံးပြုမှုကိုအခြားအခြေအနေများ
အသုံးပြုသူသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဥပဒေ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်မှုနှင့်ဤတရားဝင်အသိပေးချက်တို့နှင့်အပြည့်အဝလိုက်လျောစွာဝီရိယရှိရှိအသုံးပြုရန်ကတိပြုသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင် AB Internet Networks 2008 SL ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို AB Internet Networks XNUMX SL ၏ကြိုတင်၊ စာဖြင့်ရေးသား။ ခွင့်ပြုချက်မရရှိခဲ့လျှင်၊ ၎င်းတွင်ပါရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုစီးပွားဖြစ်အမြတ်ထုတ်ရန်တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်။ သော်လည်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသည်။ အသုံးပြုခွင့်။
ဤဆိုဒ်သည်ဤဆိုဒ်သို့ပို့ေပးသည့်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်ေသာဒေတာဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းသည်။ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်းများအတွက်သင်၏အခွင့်အရေးကိုသင်သုံးနိုင်သည့်လိပ်စာသို့ (at) actualblog (dot) com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
ဤဆိုဒ်၊ ဆက်စပ်ဒိုမိန်းများနှင့်အကြောင်းအရာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ AB Internet Networks 2008 SL ဖြစ်သည်။
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းပြင်ပရှိအခြားသူများကစီမံခန့်ခွဲသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဦး တည်သွားသော hyperlink များပါ ၀ င်သည်။ AB Internet Networks 2008 SL သည် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်စုဆောင်းထားသည့်အကြောင်းအရာများအတွက်အာမခံချက်မရှိပါ။
ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်မဆိုသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများအားလုံးမှ AB Internet Networks 2008 SL မှထုတ်ပေးသော၊ ကြိုတင်၍ ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရှိပါကမျိုးပွားခြင်း၊ ဒီ website
AB Internet Networks 2008 SL ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ၊ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမတူအောင်ပြုလုပ်ရန်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် AB Internet Networks 2008 SL သည်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏အပြောင်းအလဲ (သို့) ခြယ်လှယ်မှုများကြောင့်တာ ၀ န်ယူနိုင်ခြင်း (သို့) ပေါ်ပေါက်လာခြင်းများအတွက်တာဝန်မရှိပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း ARCO အခွင့်အရေးများ
သင်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အော်ဂဲနစ်ဥပဒေ ၁၅/၁၉၉၉ တွင်အသိအမှတ်ပြုထားသောအခွင့်အရေးနှင့်အချက်အလက်နှင့်ဆန့်ကျင်မှုကိုရယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုသင်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကို AB သင်၏အင်တာနက်စာမျက်နှာများ 15 SL ၏စာတိုက်လိပ်စာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည်ရေးသားထားသောနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုချက်အားဖွငျ့ဤအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးနိုင်လိမ့်မည်ဟုသင့်အားအကြောင်းကြား, အတူတူသင်၏ ID ကိုသို့မဟုတ်မိတ္တူဖော်ထုတ်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း, AB Internet Networks 1999 SL ၏စာတိုက်လိပ်စာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ပူးတွဲ ID ၏မိတ္တူပူးတွဲ (မှာ) actualityblog (အစက်) com ။ ၁၀ ရက်မတိုင်မှီသင်အသုံးပြုရန်တောင်းဆိုထားသောအခွင့်အရေးကိုအတည်ပြုရန်သင့်တောင်းဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
AB Internet Networks 2008 SL သည်မည်သည့်အာမခံချက်မျှပေးအပ်ခြင်းမရှိသလိုမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။
က The နွှဲ, လိမ်လည်လှည်သို့မဟုတ်ဤဥပဒေရေးရာသတိပြုပါအလွဲသုံးစားလုပ်ဆန့်ကျင်
တတိယအုပ်စုတွေကပေးအပ်န်ဆောင်မှုများ၏တရားဝင်မှု, အရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရ, အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်ရရှိနိုင်မှုမရှိခြင်းနှင့် website တွင်အသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ပါစေတော်မူ၏။
AB Internet Networks 2008 SL သည်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုတရားမဝင်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။
ဥရောပကော်မရှင်သည်အွန်လိုင်းအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးပလက်ဖောင်းကိုအောက်ပါလင့်ခ်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ http://ec.europa.eu/consumers/odr/။ စားသုံးသူများသည်၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုအွန်လိုင်းအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးပလက်ဖောင်းမှတဆင့်တင်ပြနိုင်လိမ့်မည်
ယေဘုယျအားဖြင့် AB Internet Networks 2008 SL ၏ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူများနှင့်ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောဆက်ဆံရေးသည်စပိန်ဥပဒေနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ရှိသည်။
အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုဤဥပဒေရေးရာအခြေအနေများသို့မဟုတ်ပေါ်တယ်နှင့်ပတ်သက်။ မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်သံသယရှိပါက, (at) actualblog (dot) com ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အသုံးပြုသူမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်း၊ AB Internet Networks 2008 SL မှသူတို့၏ကုသမှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့်သဘောတူညီမှုအခြေအနေများအားဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်နည်းလမ်းများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအကြောင်းကြားရန်အကြောင်းကြားခံရသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
လက်ရှိဥပဒေနှင့်အညီ, AB Internet Networks 2008 SL သည် SPAM အလေ့အကျင့်များကိုမပြုလုပ်သောကြောင့်ယခင်ကအသုံးပြုသူမှယခင်ကတောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိသေးသောစီးပွားဖြစ်အီးမေးလ်များကိုမပို့ပါ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိပုံစံတစ်ခုစီတွင်အသုံးပြုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာ / စာစောင်အားအထူးတောင်းဆိုထားသည့်စီးပွားရေးအချက်အလက်များမည်သို့ပင်ဖြစ်စေလက်ခံရယူရန်သူတို့၏ခွင့်ပြုချက်ကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိသည်။